Juventus ayaa Dhadhansiiay AC Milan guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan… – Hagaag.com
Juventus ayaa Dhadhansiiay AC Milan guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan…
Juventus ayaa guuldaradii ugu horaysay ee tartanka dhadhaniisay AC Milan xilli ciyaareedkan ka dib markii ay 3-1 ku garaacday fiidnimadii Arbacada kulan ka tirsan wareega 16ka ee Horyaalka Talyaaniga.
Juventus ayaa ku hormartay gool uu dhaliyay Federico Chiesa daqiiqadii 18-aad, halka Milan ay ku barbareysay gool uu dhaliyay David Calabria daqiiqadii 41-aad, ka hor inta Chiesa uusan u dhalin goolka labaad isaga iyo Juventus daqiiqadii 62-aad, kadibna Stone McKinney ayaa dhaliyay goolka seddexaad daqiiqadii 76-aad.
Juventus ayaa kor u qaadday dhibicdeedii si ay u gaadho 30 dhibcood si ay uga soo kacdo kaalinta toddobaad una soo degto kaalinta afraad, halka Milan dhibcaheeda ay ku joogsadeen 37 dhibcood oo ay ugu sareeyaan kala horeynta.
Tani waa guuldaradii ugu horeysay ee Milan ka soo gaarta horyaalka xilli ciyaareedkan marka loo fiiriyo guulaha ay ka gaaraan 11 kulan iyo 4 kulan oo barbaro ay galeen, halka guushani ay noqotay tii sideedaad ee Juventus, oo kulan dib loo dhigay gacanta ku heysato, marka la barbardhigo guuldarro hal kulan ah iyo 6 barbaro ah.
Guushani waxay fursad siisay kooxda difaacaneysa horyaalnimada ee Juventus inay rajo ka soo gasho inay ku soo laabato hogaanka.